MA QIIRAA MISE WAA QARAAR? W.Q: Maxamed Jaamac Meygaag (Action) Q.2aad. - Haldoornews
MA QIIRAA MISE WAA QARAAR? W.Q: Maxamed Jaamac Meygaag (Action) Q.2aad.
Waxaa inoo socday qormadeenii ku saabsanayd arrimaha ay Xukuumaddu soo saarto ee aanay fulin ama aanay sii joogteyn fulintooda. Qormadii hore waxaynu ku soo sheegnay saddex qodob oo kala ahaa, 45kii Maalmood ee Madaxweyne Siilaanyo u qoondeeyay in si joogto ah loo fuliyo ol-ole nadaafadeed oo dalka oo dhan ka qabsooma, Mamnuucidda Gaadiidka bidix-layaasha ah (Shookaanta Midigta ku leh) iyo Mamnuucidda Isticmaalka Bacda. Saddexdaas qodob ma jiro mid sidii ay xukuumaddu u qorshaysay u fulay, waxay noqdeen kuwo laga tagay oo aan dibna waxba la iskaga waydiin Qormaddeenan waxaynu ku eegi doonaa afar qodob oo kale oo ay xukuumaddu intay ku dhawaaqday hirgelintooda aanay wax badani ka qabsoomin.
30% in Xawaaladuhu ay ku bixiyaan lacagta Somaliland lacagaha dadweynaha loo soo diro
17.06.2015 Guddida Joogtada ah ee Golaha Wakiiladu mar ay kulan xog-waraysi ah kula kulmeen guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland Mudane Cabdilaahi Xaaji Jaamac, su’aalana ku waydiiyeen ayaa guddoomiyaha Baanku sheegay in baanku uu si fiican u shaqeeyo una baahan yahay in dib-u-eegis lagu sameeyo xeerka baanka dhexe. Waxaa uu guddoomiyuhu sheegay in ay xawaaladaha dalka wada hadleen kuna amreen inay 30% ku siiyaan bulshada ay u adeegayaan lacagaha looga soo diro dibadaha oo ay Kaash uga dhigaan, inta kale na Doolar. Waxaa kale oo uu guddoomiye Cabdilaahi intaas raaciyay inay xawaaladaha geeyeen 24 ka mid ah shaqaalaha Baanka dhexe si ay ugu ilaaliyaan fulinta heshiiska ah in 30% lagu bixiyo lacagta Somaliland. Guddoomiyaha iyo agaasimuhuna Baanka dhexe na ay ku kormeeri doonaan, joogteyn-na doonaan hawshaas. Waxaan jirtay in waraaq waajibinaysa arrintan lagu dhejiyay qaar ka mid ah xawaaladaha oo qof kasta oo xawaaladda soo galaa uu arki karo. Laakiin heshiis kani muu noqon mid hirgala, xawaaladuhuna lacagta sida loo soo gaadhsiiyo uun bay dadweynaha u wada siiyaan iyagoon qeyb na sarrifin.
Mamnuucidda Bacda Madaw ee lagu dhejiyo baabuurta (BEERSOOL)
29.09.2015 Taliyaha Ciidanka Booliska, Sarreeye Guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan oo shir-jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa oo ay wehelinayaan Hoggaanada ciidanka boolisku iyo saraakiisha kale waxaa uu sheegay in la mamnuucay Bacaha loo yaqaanno BEERSOOSHA ee lagu dhejiyo baabuurta, taas oo ol-olihii lagaga fujinayay laga bilaabay dhamaan magaalooyinka Somaliland. Waxaa uu Taliyuhu sheegay sababta looga fujinayaa maaha in cid walba ay wax ku qarsanayso ee waa dhinaca nabad-galyada. Ol-olahan oo socday muddo kooban oo marka gaadhiga lagaga jaro Gobolka ay kaga dhejiyaan Suuqa. Waxaan waydiiyay mid ka mid ah ciidanka Taraafikada oo aan ku idhi, horta Beersooshii aad ka goyn jirteen baabuurtu halkay ku dambaysay, wuxuu iigu jawaabay niyaw Mooyi!!! Waxaan maqlay in hal-meel oo kaliya la gaga gooyo beersoosha meeshaasi na waa MADAARKA CAALAMIGA AH EE CIGAAL. Go’aankanina muu noqon mid waara.
In dadka Ajaanibka ah laga saaro dalka
24.12.2015 Shir ay yeesheen Golaha Wasiiradda Somaliland ujeedadiisuna ahayd adkeynta nabad-galyada iyo amniga qaranka, gaar ahaanna ilaalinta xuduudaha dalka (Bad, Berri iyo Cir ba) iyo khataraha ka iman-kara isu-socodka. Waxay soo saareen go’aanno lagu adkeynayo amniga iyo xasiloonida guud ee dalka, taas oo la xidhiidha, socdaalka, tahriibka iyo ajanabiga sharci-darrada ku jooga dalka. Waxay isla garteen oo soo saareen in wixii ka dambeeya 01.01.2016 ruux kasta oo sharci darro ku jooga Jamhuuriyadda Somaliland inuu dalka kaga baxo muddo dhan 30 cisho gudahood ama waa in uu muddadaa gudaheeda ku qaato Warqadda Oggolaanshaha Degganaanshaha Dalka. Muddadaa kaddib, Hay’adaha Ammaanka ee ay arrintani khusayso waxa ku waajib ah inay qofka ka saaraan Dalka Jam. Somaliland. In kastoo arrintani aanay wakhti badani ka soo wareegin, hadana waxay martay dariiqii ay mareen, go’aanadii ka horeeyay ee aanay xukuumaddu fulin.
In halka Doolar lagu sarrifo 6000 Shilin Somaliland ah
03.12.2015 Waxaa uu Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo Digreeto ku magacaabay guddi ka soo tala bixisa, isla markaana soo daraasaysa sidii loo xakamayn lahaa sixir-bararka. Guddidan oo ka koobnayd masuuliyiintan oo uu hoggaaminayay Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland Mudane: Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici saddex wasiir iyo guddoomiyaha baanka. Waxaa uu madaxweyne Siilaanyo u sheegay guddida masuuliyadda iyo waajibaadka ka saaran arimaha dhaqaalaha ee la socodka qiimaha shilinka Somaliland iyo kolba halka uu marayo sixirka suuqu (Korodh iyo Hoos-u-dhac ba). Waxaa uu madaxweynuhu sheegay in baryahan ba ay dalka ka jirtay sixir-barar ba’an oo saamayn toos ah ku yeeshay nolol-maalmeedka bulsho weynta Jamhuuriyadda Somaliland. Sidaa darteed waxaa muhiim noqotay in arrimahan si qoro-dheer loo baadho, looga na soo war-bixiyo, isla markaana laga soo ururiyo xog waafi ah oo lagu go’aan qaato.
Hadaba guddidani waxay qabatay shaqo baaxad leh dhinacyo badan na way ka xog-waraysteen arrintan loo igmaday, waxaanay shirar is xig-xiga la yeesheen ciddii ay khusaysay. Ugu dambeynna waxay soo saareen go’aanno ka kooban Sagaal qodob oo ay ka mid ahaayeen in Qiimaha Halka Doolar lagu sarrifo 6000 ShSL ah, ciddii dhaafisana ay ku mudan doono ciqaab. Labadii wiig ee xigay ba dalka oo dhan si habsami ah bay u ga hirgashay arrinta sarrifku, maciishada iyo saamaynta qiimaha sarrifka aan wada soconi ay ku yeesheen bulshada marka laga yimaado. Arrinta sarrifku may noqon mid ku sii negaata halkii dawladdu u astaysay oo taasi markhaarigeeda idinkaa furi doona.
Waxaa halkaa ka soo muuqatay in xukuumaddeenu aanay xil-weyn iska saarin marka hore inay ogaato sababta keentay arrinka ay rabta inay fuliso, sababtiisa, iyo saamayntiisa ba. Iyadoon la daraasayn na ay ku dhaqaaqdo dhaqan gelintiisa, wakhti yar ka dib na ay halkaa ku fashilanto. Run ahaantii dadweynuhu kalsooni buuxda ayay ku qabaan marka hore ee dawladdu waajibinayso arrin, culayskasta oo ay ku tahay bulshada. Way aqbashaa ka dib na marka ay dawladdu sii wadi waydo arrinkii, waxaa yaraada kalsoonidii shacabku ku qabay.
Waxaan xukuumadda talo ugu soo jeedin lahaa dhawr kan arrimood;
Qorshe kasta oo horumarineed intaydaan fulin, siyaasaddeeda oo si cilmiyeysan loo baadhay diyaariya oo ciddii u hoggaansantana lagu bogaadiyo, ciddii ka hor-timaadana lagu ciqaabo,
Xukuumaddu yaanay kalsoonida shacabka luminin waayo Bulshadu inta badan diyaar bay u yihiin inay fuliyaan oo ay qeyb ka ahaadaan horumarinta dalkooda.
W.Q: Maxamed Jaamac Meygaag (Action)
Hambalyo Meher Wacan: Mustafe Abdi Osmaan (Dad-hore) Iyo Huda Abdirashiid Cabdi oo meherkoodu ka dhacay Gabiley.
Daawo: Safiir ku Xigeenka Somaliya ee Dalka Masar oo isku Dayay inuu Gabadh Soomaliyeed ka iibiyo Maydka Walalkeed oo Halkaasi lagu Dilay.